Myanmar Defence Weapons: J-10နှင့် Mig-29SEတို့အား နှိုင်းယှဉ်လေ့လာခြင်း
Posted by MM at 3:32 AM
Wayne Tun Myint January 16, 2014 at 5:14 AM
nice and detail article! Bravo!
thiha job January 16, 2014 at 5:16 AM
တရုတ်တွေတော.မ၀ယ်ပါနဲ. မြန်မာနိုင်ငံနဲ.သင်.တော်တာMIG 29 တွေ နေရာမရွေးတက်လို.ရတယ် အပိုပစည်းက ကြိုဝယ်ထားရင်ရတာဘဲ ဈေးလဲသိပ်မကွာဘူး အင်ဂျင်နလုံးပါတာ ပိုကောင်းတယ် လေအ၀င်ကိုပိတ်လို.ရတာလည်းကောင်းတယ် မြန်မာပြည်မှာမိုးတွင်းလိုမျိုးဆိုသုံးလို.ပိုတည်မယ်
sai hein January 16, 2014 at 5:36 AM
J-10 ကိုကြိုက်တယ်....မစ် တွေက ကျနော်တို့ဆီမှာ ရှိနေတော့ မလိုတော့ဘူးထင်တယ်...အသစ်ကို စမ်းကြည့်သင့်တယ်
lusoe lay January 16, 2014 at 6:41 AM
Mig 29 ထဲကဘဲ ၀ယ်သင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ် အဓိကက ဈေးသက်သာတာထက် ကြာရှည်အသုံးခံဖို့ပါ ပြီးတော့ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံဖြစ်ခြင်းကြောင့် သူ့ပစ္စည်းကို စိတ်ချလက်ချမသုံးသင့်ဘူးလို့ မြင်ပါတယ်
Ko Ko Naing January 16, 2014 at 7:42 AM
All China made are lousy. Should not trust. MiG & Sukhoi are famous and have best record.
Nyi M. Lwin January 16, 2014 at 8:00 AM
Nyi M. Lwin January 16, 2014 at 8:02 AM
I would prefer MiGs over J-10.
1) Russian fighters are proven
2) Chinese J-10 are known to beaexact copy of Russian Su-27
3) Political situation between Myanmar and China may vary. We might want lesser influence from Chinese. (We dont want those people taking our resources and supply arms to our rebels. If we keep using their military hardware, Myanmar might be depending on China which is very bad)
4) We still have other alternatives such as Indian jets PAK FA (co-developed by Russians too) and Japanese technology (not practical at this moment but Japan is going to change their laws very soon. Perhaps Japanese can build their jets in Myanmar)
P.S Just my opinions :)
oottoe January 16, 2014 at 8:37 AM
စောက်ရူးတွေးးးမင်းအမေလင်တရုပ်က မြစ်ဆုံရေကါတာပေးမဆောက်လို့..လေယဉ်အပိုပစည်းဆက်မရောင်းတော့ရင်အဲဒီလေယဉ်တွေဘာလုပ်ရမှာလဲ...mig (သို့)f18 ဆို တော်သေးရဲ့..ရေတပ်မှာ..တရုပ်စစ်ရေယဉ်တွေ..အပိုပစည်းမရလို့...ညစ်နေတာတွေတပုန်ကြီး..ကို့လွန်းကျင်းမှာကို့ဘာသာဆောက်တဲ့စစ်ရေယဉ်ကမှဟုတ်တုတ်တုတ်ရှိသေးတယ်..ငါဆရာ..ပါစီမောင်မောင်ကြီးကိုဦးညွှတ်ပါ၏.ဆရာဆောက်ခဲ့သော4seriece ရဲ့ PGM များကိုအစဉ်သတိရလျှက်...
Falcon January 16, 2014 at 7:16 PM
သူတို့လေ ယာဉ်တွေရဲ့ အကြောင်း ကို ကောင်းကောင်း သိထား အောင်... အနည်း အကျဉ်း တော့ ၀ယ် သင့် တယ်ဗျ။ အခု MIG 35 တွေ လည်း ထပ်ဝယ် လိုက်ပြီမဟုတ်လား။ တရုတ် ကို မကြိုက်လည်း ရေရှည် ဆက်ဆံနေရမှာ။ သူကလည်း ကြိုက်သလို အမြတ်ထုတ်နိုင်တဲ့ နိုင်ငံကို ချော့ စား နေမှာ ပဲ။ အပို ပစ္စည်း၊ အဆင့် မြင့် တင် နိုင်မှု၊ သင်တန်း ကိစ္စ၊ တွေကို တရုတ်က လို လို လားလား ကူညီမယ် ဆို ရင်.. တစ်အုပ်လောက်တော့ ၀ယ် ထား သင့် တယ်။ Super Sonic တွေတုန်း က ၊သူတို့ သင်မပေး လို့ ကိုယ့် ဘာ သာ ပဲ မောင်း ခဲ့ရတယ် ဆို ဗျ။
နောက်တစ်ခု က ... ဆောင်ပါးရှင် ကို ပြောချင်တာ ပါ။ အရမ်း technical ဆန်တဲ့ အသုံး တွေ ကို .. ကျွန်တော် တို့လို သာမန် ပြည် သူတွေ နားလည်အောင်.. ခက်ဆစ်လေး ဖွင့် ပေးပါဗျာ။ အခု က မြန်မာ့ တပ်မတော် ဆို စိတ်ဝင်တစား ရှိလာ ကြပါပြီ။ အရင်က ကြိုက်တာ မကြိုက်တာ အသာ ထား... အခြား တိုင်း ပြည် ထက်တော့ နိမ့် ကျ မသွား စေချင်ဘူး။ ယ ထက် ဘ ကို ကောင်း ကောင်း နိုမ် ထား နိုင် ရင် ... ကျေနပ်ပြီဗျာ။ ထိုင်း က လည်း မြန်မာ ပိုင်း လော့ တွေ.. ရုရှား မှာ မစ်ဂ် 35 တွေ အမောင်း သင်နေတာ ကြည့် ပြီး ပြင်ဆင်နေမှာ ပဲ...။ ဂရစ်ဖင် တွေနဲ့ ယှဉ်ထား တာ လေး တွေလည်း ရေးပေးပါဦး ဗျာ။
Nyi Lay January 16, 2014 at 10:02 PM
J-10 က အပိုပစ္စည်းအလွယ်ရနိုင်တယ်ထင်ရပေမယ့် ကျွန်တော်နိုင်ငံအနေအထားအရ ကြာရှည်အသုံးခံမယ့် Mig ကိုပိုသဘောကျတယ် တရုတ်ကိုကာလရှည်မှီခိုနေရတာကိုလဲ လျှော့ချနိုင်မယ်ထင်တယ် အဓိက က ကိုယ့်နိုင်ငံက လေသူရဲတွေ ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် အသုံးပြုတတ်ဖို့ပဲလေ ပိုစိတ်ချရမယ့်ပစ္စည်းကိုပဲသုံးသင့်ပါတယ်...။
zaw linn January 16, 2014 at 10:36 PM
တယုတ်စက် တစ်ရက်စုတ်ဆိုတာ သက်ဆိုင်ရာလူကြီးတွေ သိသင့်တယ်။ တယုတ်ဟာ အနာဂါတ်မှာ အချိန်မရွေး ရန်သူဖြစ်လာနိုင်တယ်။ ထုတ်လုပ်တဲ့သူက အားနည်းချက်ပိုသိတယ်။ ရုရှားကသာ ၀ယ်စေချင်တယ်။ မျိုးကွဲကို လိုချင်ရင် Su-27က အကောင်းဆုံးပဲ ထင်တယ်။ ဘ က J-10B ကိုဝယ်မှာ ဆိုတော့ ကိုယ်က ရုရှားထုတ်မှ ကောင်းမှာ။ တယုတ်က A-5 နဲ့ F-7 တွေတုန်းက ကိုယ့်ကို ပညာပေးတာ မေ့နေကြပြီထင်တယ်။ မြန်မာပြည်သား စစ်စစ်တွေကို တယုတ်ထုတ် ကောင်းတာတွေ့ဘူးလား မေးကြည့်ရင် အဖြေက တစ်ခုတည်းသာထွက်မှာ။ ကို mm ရေ post တစ်ခုစောင့်ရတာ အသက်တိုတော့မယ်ဗျာ။
Yeyanniang January 16, 2014 at 11:19 PM
I like Mig 29 , which is most widely used mil ti roll fighter in the World
Aung Kaing Lwin January 17, 2014 at 3:13 AM
ပြောစရာလိုမယ်မထင်ပါ၊ တယုတ်ကအနောက်နိုင်ငံတွေ၊ရုရှားတို.လိုနိင်ငံတွေရဲ.နည်းပညာတွေကိုရရင်ရသလိုခိုး၊မရရင်ရုရှားဆီက၀ယ်၊အဲဒီလိုနဲ.ဒီအဆင်.ရောက်လာတာအထင်ကြီးစရာလား။ လေယာဉ်ရဲ.သမိုင်းချင်းယှဉ်လိုက်ပါ၊ဆီနဲ.ရေလိုကွာတယ်ဆိုတာအားလုံးသိပါတယ်
sai hein January 17, 2014 at 4:41 AM
ကျနော့်အထင်တော့ အရည်အသွေးက J-10 သာ နည်းနည်းသာတယ်လို့ထင်တယ်...ဒါကလည်း ကိုအမ်အမ် ရဲ့ ပိုစ့်ပို မှီပြီးပြောတာပါ....အခု လက်ရှိပါကစ္စတန်မှာ သုံးနေတာ ဘာအသံမှမကြားရပါဘူး ..ပျက်ကျတယ်တို့ စက်ချို့ယွင်းတယ်တို့ မကြားရသလောက်ပဲ...ပဂ္ဂိုလ်ရေးအရ ၊ လူမျိုးရေးအရ တရုတ်ဆိုတာနဲ့ မကောင်းဘူး ..အင်ကြီးပဲဆိုတာ ဖြစ်နေရင်တော့ နိုင်ငံလည်း တိုးတတ်မှာမဟုတ်ဘူး...အပေါ်ကလူတွေက မြစ်ဆုံကြောင့် တရုတ်ကိုဆဲနေတာ တွေ့လိုက်တယ်...ဒီမြစ်ဆုံဆိုတာ ကိုယ့်နိုင်ငံထဲမှာ ရှိတဲ့မြစ်.. သူတို့ဆည်ဆောက်ချင်တိုင်း လာဆောက်လို့မရပါဘူး....ဒီလို ပရောဂျက်ကြီးတွေဆိုတာ တဦးတည်းလုပ်လို့မရတာ သိထားပြီးမှ ပြောသင့်တယ်...............ကျနော် တရုတ်မဟုတ်ပါ..
zaw linn January 18, 2014 at 5:40 PM
J-10 က ထုတ်တာမှ မကြာသေးတာ။ ပျက်တဲ့သတင်းတွေ မကြားရတာက အသုံးနည်းလို့လေ။ ပျက်ရင်တောင် ကိုယ်ထုတ်တဲ့ လေယာဉ်ကို မရောင်းရမှာ စိုးတာနဲ့ ဘယ်သူက ပြောမှာလဲ။ FAW ကားနဲ့ Hinoကား ဘယ်လောက်ကွာသလဲ ဆိုတာ ကလေးတောင်သိတယ်။
Kaung Lynn February 14, 2014 at 9:44 PM
ko phone January 17, 2014 at 1:37 PM
One of the best article KO MM.. What about F18?
Sophie Yeamino January 17, 2014 at 4:41 PM
funny man; you are crying man over ice-cream
Myat Thu Rein January 18, 2014 at 10:41 AM
Ok..Brothers..according to this article ( written by Ko Sky Hunter ), the price of J-10B is about the same is MiG-29SMT which is about 55Million US$, so if the2air crafts have the same price shouldn't we buy the MiG-29SMT ?? MiG-29 series isaseries of proven air crafts and the I also prefer the RD-33 engine which is very reliable. J-10 uses WS-10 engine which is very unreliable. What if the the engine stops in mid air? I hope the ejection seat works properly on J-10. J-10 also uses PL-12 missile which has very low kill-probability. Chinese electronics are good on paper but in practice they always give trouble. So it's my sincere opinion that if the price is not much different PLEASE BUY THE MIG-29 SMT or MIG-35.
zaw linn January 18, 2014 at 5:34 PM
ကာချုပ်ကြီး ခင်ဗျား ကျေးဇူးပြု ပြီး တယုတ်လုပ်တွေ မ၀ယ်ပါနဲ့။ ကာလတို မကြည့်ဘဲ ယက ဆွီဒင်ထုတ် တိုက်လေယာဉ်တို့ကို ထည့်စဉ်းစားပေးပါ။ MIG-35 သို့မဟုတ် SU-30 လောက်တော့ဝယ်သင့်ပါတယ်။
Kyaw Thu Htwe January 18, 2014 at 11:30 PM
တရုတ်j-10၀ယ်မယ်အစားကိုယ်နိူင်ငံကထုတ်မယ်လေယာဉ်ကိုပဲအဆင့်မီထုတ်ပြီသုံးစေခြင်တယ် ဒါမှနောကိပိုင်းလေယာဉ်ထုတ်လုပ်မူကတိုးတတ်လာမှာ ၀ယ်ရင်တော့ဘယ်တော့မှဝယ်လို့ပြီးမှာမပာုတ်ဘူး
sai hein January 19, 2014 at 10:30 PM
BN တွေ youtube မှာ ကျနော်တို့ တပ်မတော်နဲ့ သူတို့တပ်တွေကို ယှဉ်ပြထားတာ .....ကျန်တာတော့ အကုန်သာပါတယ်..အခုနောက်ပိုင်း ရေတပ်က သူတို့အောက် နည်းနည်းရောက်သွားသလိုပဲ.....ကိုMM ရေ နေဗီဆီလ်း တွေရဲ့ပုံလေးတွေ ရှိရင် တင်ပေးပါလား..နောက်ပြီး လေတပ်အကြောင်း များများတင်ပေးပါ...
Mg Phone January 20, 2014 at 9:15 PM
I prefer MiG than chinese J 10 and if possible we should buy the Mig 35. It ia suitable for air dominance and also ground attacking because of it's amazing radar and control system.
Myo Htut January 21, 2014 at 8:25 AM
တရုတ် ဂျပန် စစ်ဖြစ်ရင် မြန်မာလဲစစ်ဒဏ်ခံရမှာ ဒီကြရင် မြန်မာကဘယ်လိုကာကွယ်မှာလဲ အရေအတွက် မယှဉ်နိုင်လဲ နည်းပညာနဲ့ ဗျူဟာယှဉ်န်ုင်မှဖြစ်မယ် ကြိုပြင် ထားရမယ် j10 နဲ့တော့ အလုပ်မဖြစ်ပါ
Saimyo Mintun January 25, 2014 at 6:47 PM
လေတပ်ကို ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ. တည်ဆောက်မလဲဆို တဲ.အပေါ်မှာမူတည်ပါတယ် offshore ကာကွယ်ရေးအတွက်ပါထည့်စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တော့ MiG 35/ 29 SMT သို. Su 30 တွေကပိုပြီးအားသာပါလိမ့်မယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ တရုတ်က သူ.ကမ်းလွန်ကာကွယ်ရေး အတွက် J 10 ကိုမသုံးပါဘူး J 11 , Su 30 MKK အစရှိသည်အားဖြင့် သုံးမယ်လို. ယူဆရပါတယ်။ ကြားဖြတ်/ တန်ပြန်လေကြောင်းထိုးစစ်အတွက် ဆိုရင်တော့ MiG , Su , J series တွေ ဟာ 4+ generation fighter တွေဆိုတော့ တန်းတူညီမျှ ခန်.ပါပဲ။နောက်ပြီး stealth fighter တွေကိုတန်ပြန်ဖို.လည်းထည်.စဉ်းစားရမှာပါ။အဲ.ဒီအတွက်ဆိုရင်တော့Su/MiG တွေကပိုပြီးသင့်တော်ပါတယ်။ အဓိကကျတာကတော့ အဲ.ဒီလေယာဉ်တွေကိုမောင်းမဲ. လေသူရဲတွေပါပဲ သူတို.ရဲ.ကျွမ်းကျင်မှု/ မိမိ လေယာဉ်မှာ ရှိတဲ့ performances တွေကိုကောင်းကောင်းအသုံးချ နိုင်မှု က ပဲအဆုံးအဖြတ်ပေးသွားမှာပါ။
Harrier Chester January 26, 2014 at 5:30 AM
ကျွန်တော်ကတော့ Mig တွေကိုပိုပြီးဝယ်စေချင်ပါတယ်......တရုပ်က ရန်သူအစစ် မဖြစ်ဘူးဆိုရင်တောင် မကောင်းဆိုးဝါးတစ်ကောင်တော့သေချာပေါက်ဖြစ်မှာပါ.....Mig က ကိုယ့်မှာလည်းရှိပြီးသားဆိုတော့ pilotတွေအတွက်ကောင်းရုံမက ရန်သူတွေအတွက်လည်းခြိမ်းခြောက်မှုဖြစ်စေမှာပါ.....pilot တွေကတော့ perfect ဖြစ်အောင်တော့ train ရမှာပေါ့ဗျာ......အနိမ့်ဆုံး Mig-29 SMT မှသည် အမြင့်ဆုံး Mig-35 ထိဝယ်နိုင်ပါစေဗျာ.............
Kaung Lynn February 14, 2014 at 9:50 PM
တရုတ်က မြန်မာနဲ့ မတည့်လို့ သူတို့လိုချင်တာမရလို့ အပိုပစ္စည်းတွေ upgrade လုပ်မယ့်ပစ္စည်း တွေမထောက်ပံ့ ဘူးလို့ခြိမ်းခြောက်ရင် မိအေး နှစ်ခါနာဖြစ်မယ်
aung moe February 15, 2014 at 9:03 PM
မြန်မာနိုင်ငံ အတွက်ဆိုMig 29 ကပိုပြီးသင်တော်မယ်ထင်တယ်
ko ko February 26, 2014 at 4:28 AM
တတ်နိုင် Su 35 လုပ်လိုက်ကွာ ရုရှား က ပိုက် ဆံပေး ရင် ရောင်းမှာဘဲ အနောက်အုပ်ဘဲ ကန့်သတ်ချက်တွေရှိတာ။
Aung Kaing Lwin April 5, 2014 at 11:15 PM
MIG29 ကF 16 ရဲ.ပြိုင်ဘက်ဆိုတာမမေ့ပါနဲ.၊ တယုတ်ရဲ. J10 ဆိုတာကရုရှားနဲ.အနောက်အုပ်စုတွေရဲ.နည်းပညာကိုခိုးလို.ရရင်ရ၊မရရင် ၀ယ်၊အဲလိုပုံနဲ.ဒီအဆင့်ကိုရောက်လာတာ၊လုံးဝအထင်မကြီးဘူး။ တချိန်ချိန်မှာရန်သူဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့နိုင်ငံကမ၀ယ်တာအကောင်းဆုံးပါ။
TRUST November 17, 2015 at 3:57 PM
ရုရှားလုပ် Mig တွေကဈေးပေါပေမဲ့ sensor ပိုင်းမှာ Us made တွေကိုမမှီပါဘူး။ရုရှား က radarတွေsensorတွေ ကိုအနောက်နိုင်ငံတွေကခိုးနေတာ။ F22 တို့ Euro fighterတို့ပဲ့ဝယ်။